Mahazengy – Fianarantsoa: nirefodrefotra ny basy, jiolahy efatra lavon’ny polisin’ny Fip | NewsMada
Mahazengy – Fianarantsoa: nirefodrefotra ny basy, jiolahy efatra lavon’ny polisin’ny Fip
Tsy nifandrenesana ny poa-basy nandritra ny fifampitifirana teo amin’ny polisin’ny Fip sy ireo andian-jiolahy nirongo fitaovam-piadiana mahery vaika tao Fianarantsoa, omaly maraina. Jiolahy efatra indray maty nandritra ny fifampitifirana…
Avy nanafika tao Ankazobe Ambony Fianarantsoa ireto andian-jiolahy ireto ary nifanehatra tamin’ny polisy, omaly maraina. Ankoatra ireo jiolahy efatra maty voatifitra, roa hafa kosa azo sambo-belona. Nahazo loharanom-baovao ny polisin’ny Fip momba ny fisian’ireto andian-jiolahy miaraka amin’ny fitaovam-piadiana ireto manafika toeram-pivarotana ao amin’io toerana voalaza etsy ambony io. Tonga haingana teny an-toerana ny polisy ka nifanehatra tamin’ireo jiolahy. Raikitra ny fifampitifirana satria tsy nanaiky lembenana ry zalahy. Vokany, lavo nandritra ny fifampitifirana ny efatra raha azo sambo-belona kosa ny roa hafa. Niroso tamin’ny fisavana ny tranon’ireo jiolahy avy hatrany ny polisy, mbola hita tao an-tranon’izy ireo ny ankamaroan’ireo entana halatra avy nangalarin’izy ireo. Nahitana fitaovam-piadiana toy ny basy PA vita gasy, lefona, sabatra sy karazana vy maranitra tany amin’izy ireo nandritra ny fisavan’ny polisy. Nihorohoro ny mponina teo amin’ny manodidina ny toerana nisy ny fifampitifirana tamin’ireo jiolahy satria tsy nanaiky hatramin’ny farany ireto malaso ireto. Jiolahy raindahiny amin’ny fanafihana mitam-pidiana ao Fianarantsoa ireto lavon’ny polisy ireto, raha ny fampitam-baovao avy amin’ny polisin’ny Fip. Maro ireo olona efa nitondra faisana tamin’izy ireo, araka ny fijoroana vavolombelona nataon’izy ireo, raha ny tatitra voaray avy any an-toerana hatrany.
Tsy handefitra mihitsy ny polisy…
Nilaza ary hentitra tanteraka ny kaomandin’ny polisin’ny Fip ao Fianarantsoa nampitandrina ireo jiolahy. “Ajanony io fanafihana ataonareo jiolahy io fa izao ny vokany ary tsy handefitra mihitsy izahay”, hoy hatrany ny lehiben’ny polisin’ny Fip ao Fianarantsoa. Hiaro ny vahoaka sy ny fananany ny antom-piasanay eto ka mitandrema ianareo jiolahy, raha ny nambarany. Matetika ahitana trangana fanafihan-jiolahy ao Fianarantsoa. Tsy mikely soroka manoloana izany ny polisy. Ankoatra ireo jiolahy mpanao fanafihana, ahitana ireo mpanao trafikana taolam-paty koa amin’iny faritra iny. Misy ireo efa tratran’ny polisy ary efa nidoboka am-ponja.
Mitohy, araka izany, ny fanadihadiana ireo olona voasambotra. Ao anatin’ny fikarohana ireo jiolahy tafaporitsaka ihany koa ny polisy.